ရုဖုတဆင့်တစ်ဦး BOOTABLE USB FLASH DRIVE ကို WINDOWS 10 ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
တစ်ဦး bootable USB flash drive ကို Windows 10 ကိုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို
အရေးကြီးသောဖိုင်များကိုအစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူသင့်ရဲ့အပြီးတိုင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် flash drive ကိုကနေဖျက်ပစ်လျှင်အဘယ်အရာကို format ခဲ့ပြီနည်း ဤကိစ္စတွင်, သင်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါအထူးအစီအစဉ်များရှိပါသည်။ အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များအသုံးဝင်သောအစီအစဉ်များကိုဤအမျိုးအစားမှပဲအတူတူသက်ဆိုင် Recover ။
အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover တစ်ခုထိရောက်သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် Recover ။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုဖြစ်စေတစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ, တစျခုလုံးကို drives တွေကို restore လုပ်ဖို့ကူညီပေးသည်။
ကျနော်တို့ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို recover အခြား program ကိုတွေ့မြင်အကြံပြု
အများအပြားအလားတူအစီအစဉ်များကိုမတူဘဲဥပမာ, TestDisk, ငါ၏ဖိုင်များမျက်နှာပြင်သင့် hard drive ကိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မီဒီယာကနေပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်စာရင်းကိုဖော်ပြပေးထားတဲ့အတွက်အလွန်မြန်ဆန်စွာ, ဒါပေမယ့်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့အရည်အသွေးကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် Recover ။
ပေါ်လာကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်ဖိုင်တွေကိုကယ်တင်, သင်သာသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ save လုပ်ချင်တဲ့ဖိုင်တွေကိုမာကုဖို့လိုပါတယ်, "Save" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, နဲ့ Windows Explorer ထဲမှာရန်, ပွနျလညျထူထောငျဖိုငျမြားအဘို့အအသစ်တစ်ခုတည်နေရာကိုသတ်မှတ်။
တစ်ဦး session ကိုသိမ်းဆည်းနေ
သင်ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အထူး "ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ" အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးသော်လည်း, ကွန်ပျူတာ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏အစီအစဉ်ကိုကယ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်။ နောက်ပိုင်း, သငျသညျအမွဲ "Load တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် session ကို load နိုင်ပါတယ်။
Display ရဲ့အမျိုးအစား Folders ကိုတွေ့
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များတစ်ကြိမ်မှာဖိုင်တွေအားလုံးကိုပြသပေမယ့်သင်တို့ကိုလည်းဥပမာ, စာသားစာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ် spreadsheet ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်အမျိုးအစားအားဖြင့်သူတို့ကို sort လိမ့်မယ်မသာသောအရှိဆုံးအသုံးဝင်သော features တွေထဲကတစ်ခုပေး Recover ။
အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်စနစ်များများအတွက်ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကိုအညီအမျှကောင်းစွာရှာဖွေမှုများကိုဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ခပ်သိမ်းသောဖိုင်စနစ်များကိုလိုအပ်ပါကအပိုဖိုင်စနစ်များကိုပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်, ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တွင်ထည့်သွင်းပေမယ့်နေကြသည်။
အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များ Recover ၏အားသာချက်များ:
1. ကလောက်အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကို;
အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များ Recover ၏အားနည်းချက်:
1. အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပေးဆောင်ပေမယ့်ကန့်သတ်မှုနှင့်အတူအခမဲ့ဗားရှင်း (သင်ကွန်ပျူတာထဲမှာပြန်ဖိုင်တွေမကယ်တင်နိုင်ပါ) အဲဒီမှာသည် ဖြစ်. ,
2. R.saver အစီအစဉ်ကိုမတူဘဲ, ရုရှားဘာသာစကားမထောက်ခံကြောင်းလည်းမရှိ။
Recover ကျွန်မရဲ့ဖိုင်များအသုံးပြုသူထင်ရသောအဘယ်သူမျှမပြီးသားပြန်သွားဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြဖိုင်တွေကို restore လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို hard drive တွေနှင့်ဖြုတ်မီဒီယာများ၏မြန်နှုန်းမြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ features ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်အများကြီးမယူပါဘူးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များ Recover program ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို GetDataBack R.Saver Ontrack EasyRecovery
အကြှနျုပျ၏ဖိုင်များ Recover - Recycle Bin ကိုမှတဆင့်ဖျက်ပစ်, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့် hard drive ကို format လုပ်ဖို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြဖိုင်တွေကို recover တစ်ခုထိရောက်သောကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။
ကုန်ကျစရိတ်: $ 70
Size: 31 MB အထိ
ဗီဒီယို Watch: RAMPS - Single Stepper Extruder addition (နိုဝင်ဘာလ 2019).